शाहरुख र काजोलको नयाँ रोमान्स कस्तो होला ?? « Mazzako Online
शाहरुख र काजोलको नयाँ रोमान्स कस्तो होला ??
बलिउडका ‘रोमान्स किंग’ शाहरुख खान र सदावहार सुन्दरी नायिका काजोलको जोडी नै त्यो जोडी हो, जुन जोडीलाई दर्शकले पर्दामा हेरेर कहिल्यै थाक्दैनन् । बलिउडमा अत्याधिक रुचाएको जोडीमा पर्दछ शाहरुख र काजोलको जोडी । यो जोडीको पर्दाको रोमान्स हेर्ने चाहना कसलाई पो पुरा भएको छ ?
शाहरुख काजोलको जोडीले जुन चलचित्रमा काम गरे, सबै हिट भए । चर्चित शो ‘कमेडी नाईट्स विथ कपिल’मा सँगै गएका उनीहरुले रमाईलो गर्दै भने, ‘हामी कहिल्यै फ्लप दिदैनौं, मिलेर जति काम गछौं, हिट हुन्छ’ । उनीहरुले भनेको यो कुरामा सत्यता पक्कै पनि लुकेको छ ।
अब पुन यो हिट जोडी पर्दामा रोमान्स गर्ने मुडमा भएको बुझिएको छ । निकै लामो समयको ग्याप पछि शाहरुख र काजोल ‘दिलवाले’ नामको चलचित्रमा सँगै देखा पर्दैछन् । रोहित सेठ्ठीले निर्देशन गर्ने चलचित्र ‘दिलवाले’को निर्माण घोषणासँगै यो चलचित्र शाहरुख र काजोलका फ्यानहरुको प्रतिक्षाको चलचित्र बनेको छ ।
मार्च २५ बाट फ्लोज ज्वाईन गर्ने यस चलचित्रमा शाहरुख र काजोललाई बरुण धवन र कृति मेननले पनि साथ दिनेछन् । चलचित्रमा शाहरुख र काजोलको विषेश रोमान्सलाई देखाईने निर्माण युनिटको दावी छ ।
शाहरुख खान र काजोलले ‘बाजिगर’, ‘करण अर्जुन’, ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’, ‘कुछ कुछ होता है’, ‘कभी खुशी कभी गम’, ‘माई नेम इज खान’ लगायत सुपर हिट चलचित्रमा सँगै काम गरेका छन् ।